हरितगृह - एक संरचना भएको हल्का बासना पर्खालहरु र छत र मौसम अवस्था प्रति वर्ष धेरै harvests गोली अनुमति बेला वसन्त र शरद ऋतु मा विभिन्न बिरुवाहरु को खेती, को लागि अभिप्रेरित।
हाल, Greenhouses को धेरै विभिन्न प्रकार छन्। फारममा, तिनीहरूले ठूलो र सानो, वर्ग, आयताकार हो, वा एक gable र यति मा। डी द फ्रेम पाल, कट्टर, घर को रूप मा गर्न सकिन्छ, वा एक फरक आकार छ। Greenhouses को प्रकार आकार भिन्न: वहाँ मानक र अस्तरीय छन्। तिनीहरूले polycarbonate, काठ, धातु को छन्। एक heifer यो सामान्यतया आवश्यक छ जसको लागि उद्देश्य के सामना को दृश्य मा आवश्यक छ चयन गर्नुहोस्। लागत पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
कसरी चयन गर्न बगैंचामा लागि हरितगृह?
आदर्श संरचना निम्न विशेषताहरु हुनुपर्छ:
यसलाई पर्याप्त मतलब;
विभिन्न मौसम अवस्था अनुकूल।
साथै, यो व्यावहारिक र प्रयोग गर्न सजिलो, र सस्तो हुनुपर्छ।
एक ग्रीनहाउस सबैलाई छनौट गर्दा लक्ष्य को एक किसिम pursues। केही लागि, यो एक राम्रो उपस्थिति छ र घर वा षड्यन्त्र को पृष्ठभूमिमा राम्रो हेर्न भनेर पर्याप्त छ। घरपरिवारको वा व्यवसाय गरिरहेका एक तरिका मा एक सहायता रूपमा हरितगृह विचार गर्दै छन् जो अन्य मान्छे को लागि, थप गम्भीर प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ। रूप तिनीहरूलाई लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
Collapsible वा स्थिर?
निश्चित वा तह: को Greenhouses खरिद के मोडेल को प्रकारको आवश्यक छ संग परिभाषित गर्नुपर्छ अघि। स्थिर धेरै कम जायका संग - एक पटक स्थापित र भूल। Collapsible पनि एक वर्ष स्थापना गर्न र खोल्ने दुई पटक छ। तर, ग्रीनहाउस जहाँ तपाईं गर्मी मा मात्र हो देश मा हुनेछ, र छुट्टी गाउँमा एकदम अक्सर चोरी को मामला छ, यो यो collapsible मोडेल खरिद गर्न उचित छ भने।
के हुर्किसकेका गरिनेछ
.. टमाटर, खीरे, साग, स्प्राउट्स, आदि निर्णय तपाईंको हो, तर विभिन्न ग्रीनहाउस बाली चिस्यान र प्रकाश को लागि खेती शासन र आवश्यकताहरु फरक भनेर मनमा राख्नुहोस्: अन्तिम विकल्प बनाउन अघि, तपाईं एक ग्रीनहाउस मा हुर्केका गरिनेछ के ठीक निर्णय गर्न आवश्यक छ । साथै, केही बिरुवाहरु कुनै पनि छिमेकी सहनु छैन र प्रत्येक अन्य चोट गर्न सक्नुहुन्छ।
एक पटक तपाईं त निर्णय, बोट कस्तो हुर्किसकेका गर्न, यो सम्भव उपयुक्त उचाइ संरचना चयन गर्न छ।
को Greenhouses के हुन्?
आज को रूपमा, आधुनिक बजार Greenhouses र hothouses को प्रकार, आकार, प्रदर्शन, आकार र लागत मा फरक विभिन्न प्रदान गर्दछ। आधुनिक गुणस्तर र आफ्नो उत्पादन को लागि प्रयोग विश्वसनीय कवर सामाग्री।
Greenhouses को प्रकार
कोटिंग आधारमा, यस्तो संरचना निम्न प्रकार मा विभाजित छन्:
Greenhouses को सबै प्रकार राम्रो हो, तर आफ्नो कार्य प्रभावकारिता को बदलिने डिग्री संग बाहिर छन्। प्रत्येक विधि यसको फाइदा र बेफाइदा छ।
फिल्म - सबै भन्दा व्यापक प्रयोग कवर सामाग्री को एक।
यस्तो सुविधा को मुख्य लाभ - सस्तो।
अर्को प्लस - आत्म-निर्माण को संभावना। फिलिम आफ्नै हातले Greenhouses को प्रकार धेरै सजिलो जा। यसो गर्न तपाईं केवल एक पलीथीन फिलिम, रैक, पेचकस र फर्नीचर स्ट्यापलर आवश्यक छ।
यस्तो संरचना पूर्ण छ बिरुवाहरु को सामान्य विकासको लागि त आवश्यक हो जो पराबैंगनी रेज, पहुंचाता,
एक जग निर्माण को लागि कुनै आवश्यक छैन।
दुर्भाग्यवश, फिल्म Greenhouses धेरै बेफाइदा छन्। सबै को पहिलो, यो छोटो-बस्ने छ। फिल्म आंसू र शायद यो जाडो बाँच्न एकदम सजिलो छ। निम्न मौसम, को ग्रीनहाउस फेरि तेज हुनुपर्छ। र फ्रेम शायद2भन्दा बढी मौसम बाँच्न सक्छ, बोर्डहरू वा slats बनेको छ। चिस्यान र गर्मी च्याउ काठ को विकास को लागि आदर्श अवस्था हो।
प्रबलित प्लास्टिक फिलिम थप टिकाउ विशेष ग्रिड द्वारा प्रबलित। यो मात्र बलियो हावा सामना गर्न सक्छन्, तर पनि असिना।
ग्लास - Greenhouses कवर लागि टिकाउ र टिकाउ सामाग्री। यसको विशिष्ट विशेषताहरु - उच्च प्रकाश प्रसारण र उत्कृष्ट थर्मल इन्सुलेशन।
तथापि, ग्लास त्यहाँ Greenhouses एक drawback छ: भित्र हावा धेरै, तातो धेरै खराब छ जो बिरुवाहरु को स्वास्थ्य असर गर्न सक्छ बन्न सक्छ। आफ्नो बेफाइदा - को ग्लाजिंग को जटिलता। ग्लास को एक ठूलो ठूलो एक विश्वसनीय र त्यसैले महंगा फ्रेम आवश्यक छ। ग्लास मिमी छैन कम4भन्दा एक मोटाइ हुनुपर्छ। को फ्रेम साइज ग्रीनहाउस प्रकाश ठूलो, राम्रो। तर यो ताप लागत बढ्छ। हो र प्रतिस्थापन ठूलो भाँचिएको ग्लास पनि महंगा हुनेछ।
ग्लास Greenhouses को बेफाइदा पनि मात्र होइन कारण शारीरिक प्रभाव, तर पनि कारण तापमान gradients (एक ठूलो तापमान भित्र र ग्रीनहाउस बाहिर बीच भारी चिसो अन्तर्गत फरक) तल तोड्न tends जो सामाग्री नै, को fragility समावेश हुन सक्छ।
यो अपेक्षाकृत नयाँ सामाग्री सक्रिय ग्रीनहाउस बजार माली र ध्यान जफत गरिएको छ। polycarbonate संरचना मा, फिलिम र ग्लास प्रकार भन्दा भिन्न लाभ को एक नम्बर छन्। भौतिक लाभ छ:
उच्च बल (200 पटक ग्लास बलियो), थर्मल प्रतिरोध र आगो प्रतिरोध।
यो चरम Lightness (वजन polycarbonate 16 पटक ग्लास भन्दा कम र एक्रिलिक नै मोटाइ भन्दा3पटक कम छ)।
उच्च थर्मल इन्सुलेशन र कम थर्मल चालकता।
उच्च प्रकाश transmittance (पारदर्शिता सामाग्री माथि 86% छ)। साथै, भौतिक यो लगभग सबै बेड हुन्छ भनेर, ज्योति disperses।
राम्रो हल्ला र soundproofing।
उच्च रासायनिक स्थिरता।
विभिन्न वायुमण्डलीय प्रभाव उत्कृष्ट प्रतिरोध।
Polycarbonate टिकाउ छ। लेख तत्संबंधी अप 10-12 वर्ष को ग्यारेन्टी अवधि छ।
Polycarbonate, तोड छैन दरार छैन।
यसलाई विरुद्ध विशेष सुरक्षा छ पराबैंगनी विकिरण। को polycarbonate मार्फत कडा सुरक्षा यूवी-रेज को पत्र धन्यवाद पारित गर्दैन।
सजिलो स्थापना। यो सजिलो र पानाको लचीलापन तपाईं विभिन्न प्रकारका मूल र सुरुचिपूर्ण डिजाइन सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ।
यसलाई आकर्षक र आधुनिक देखिन्छ।
polycarbonate बनेको Greenhouses सबै प्रकारका केही बेफाइदा छन्:
पाना सही (यूवी देखि सुरक्षा भित्र रेज) अवस्थित छ भने, त्यसपछि ब्याट्री जीवन एकदम (10 वर्ष देखि 2-3 गर्न) कम हुनेछ।
लगभग polycarbonate बनेको Greenhouses को सबै प्रकार जग यसको निर्माण को सामान्य कामकाज को लागि आवश्यक छ (फोटो लेख उपलब्ध छन्)।
भौतिक अक्सर पानी र माटो प्राप्त भित्र खोक्रो संरचना छ। यो खराब छ जो प्रकाश transmittance को गिरावट र गर्मी को पर्याप्त तीव्र हानि, योगदान पुग्छ। यसबाहेक, यो भताभुंग पार्छ र उपस्थिति।
Greenhouses र आफ्नो निर्माण को प्रकार
जो फारम र प्रयोग सामाग्री दुवै फरक polycarbonate निर्मित र भवन फ्रेम, अन्तर्गत। polycarbonate बनेको Greenhouses को सबै भन्दा साधारण प्रकार - कट्टर र पाल (घर)। सबै अरूलाई यी दुई भेरिएसनहरूमा छन्।
Arched प्रकार Greenhouses - बजार मा सबै भन्दा लोकप्रिय डिजाइन को एक। तिनीहरूले विभिन्न तरकारी बाली र फूल को प्रारम्भिक र वर्ष-राउन्ड खेती लागि प्रयोग गरिन्छ।
फ्रेम एक अर्ध-गोलाकार arches, अक्सर ठाडो सतह मा माउन्ट छन् जो हुन्छन्। नियम, यो पूर्वनिर्मित Greenhouses छ।
Greenhouses को प्रकार (माथि तस्विरमा) कट्टर संरचना निम्न लाभ छ:
तिनीहरूले पर्यावरण प्रभाव गर्न प्रतिरोधी हो। तिनीहरूले हिउँ ढिलाइ छैनन् सुव्यवस्थित फारममा धन्यवाद।
आफ्नो स्थापना कि आफ्नै हातले Greenhouses यी प्रकार निर्माण गर्न अनुमति दिन्छ, एकदम सरल छ।
यौगिकों को सानो मात्रा को उपस्थिति।3मिटर चौडाइ, एक पाना overlapped wherein एक विशिष्ट निर्माण, केवल अन्त्य मा फ्रेम गर्न निश्चित छन्।
polycarbonate को खपत सानो Greenhouses।
सूर्यका राम्रो प्रवेश।
यो एक जग बिना स्थापित गर्न सकिन्छ।
यो बेफाइदा हो:
चरम कम उचाइ बेड।
Arched Greenhouses यस्तो खुर्सानी वा aubergines रूपमा कम बाली लागि राम्रो।
Greenhouses र आफ्नो डिजाइन को पाल प्रकार अक्सर आत्म-निर्माण गर्न छनौट, तर कारखाना विकल्प पनि छन्। लाभ:
व्यक्तिगत डिजाइन बनाउन क्षमता।
आयाम कुनै पनि संस्कृति द्वारा सबैभन्दा गैर-मानक हुन सक्छ।
धेरै व्यावहारिक र कार्यात्मक।
आफ्नो मुख्य बेफाइदा:
तपाईं सबैभन्दा टिकाउ सामाग्री प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ फ्रेम।
उच्च अन्य प्रकार तुलनामा लागत।
polycarbonate खपत पर्याप्त ठूलो छ।
carcases को प्रकार
हरितगृह फ्रेम निम्न सामाग्री को गर्न सकिन्छ:
हाल, काठ फ्रेम कम र कम प्रयोग भएको छ। काठ पूरण क्षय हुनु, Fungi र विभिन्न अन्य विनाशकारी, नकारात्मक घटना विरुद्ध विशेष संरचना आवश्यक छ। waterproofing सामाग्री को पहिलो SHEATHING बिना काठ रैक Bury र सक्दैन। अन्यथा, संरचना अलग चाँडै पतन हुनेछ। यी सबै विवरण स्थापना प्रक्रिया एकदम समय-खपत र uneconomical छ बनाउन।
हाम्रो देशमा Greenhouses पीवीसी लागि फ्रेम शायद प्रयोग गरिन्छ। यसको लाभ:
भौतिक जंग वा Rot छैन।
छैन adversely विभिन्न रसायन, मल र यति मा द्वारा प्रभावित हुने। डी
भौतिक, यस्तो कोटिंग कुनै पनि विशेष उपचार आवश्यक छैन पूरण।
रूप एकदम सौंदर्य।
धातु फ्रेम सबैभन्दा टिकाउ निर्माण हुन्। तिनीहरूले, छैन जंग गर्छन् Rot छैन हानिकारक toxins फेंकना छैन, तिनीहरूले रंग गर्न आवश्यक छैन।
सबै भन्दा ठूलो drawback - एल्युमिनियम को उच्च लागत। साथै, धेरै बलियो likelihood को ग्रीनहाउस dismantled गर्न सकिँदैन र धातु को स्वागत बिन्दु गर्न बन्द गरे कि।
घर उद्यान र कटेज प्रयोग ती औद्योगिक Greenhouses देखि मात्र महत्वपूर्ण फरक, आफ्ना संकल्प छ। उनि एकदम एक प्रभावशाली क्षेत्र 1000 भन्दा बढी वर्ग मीटर छ लाग्न सक्छ। पु, र आफ्नो उचाइ माथि6मिटर हुन सक्छ।
औद्योगिक Greenhouses को प्रकार:
मौसमी। सक्रिय सञ्चालन अवधि एक सिजन (मार्च-नोभेम्बर) मा सीमित छ। तिनीहरूले जो उच्च मांग मा कृषि उत्पादनहरु को उपभोक्ताहरु छन् बाली, को खेती को लागि प्रयोग गरिन्छ।
वर्ष-राउन्ड, पनि हिउँदमा, उच्च पैदावार प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। जाडो Greenhouses सबै प्रकारका एकदम महंगा छन्, तर ब्याज संग अर्थव्यवस्था को उच्च लाभकारी सम्भव सबभन्दा छोटो सम्भव समय मा लागत क्षतिपूर्ति बनाउँछ।
औद्योगिक Greenhouses को दक्षता निम्न कारक निर्भर:
स्थापना र उपयुक्त तापमान र चिस्यान कायम राख्न को संभावना;
भवन निर्माण को लागि प्रयोग सामाग्री को गुणवत्ता;
उपस्थिति सिंचाई, प्रकाश, ताप र अन्य प्रणाली।
Incubator "ब्लिट्ज": समीक्षा, निर्देशन
किन्न हिंड्न-पछि "ओका" - र आफ्नो हात धेरै पटक बलियो हुनेछ
गिरावट मा एक तोरी बीउ कसरी संचालन गर्ने?
गर्न सक्छन् म खरायो स्याउ? तपाईं र खरायो दिइएको सक्नुहुन्छ के हुन सक्छ?
साहित्य मा शैक्षिक प्रक्रियाको संगठनमा शैक्षिक प्रविधि को स्वागत को प्रयोग
को मौरी आकर्षित गर्न कसरी विस्तृत विवरण
आफ्नो हातले पट्टियां देखि सुन्दर फूल
के डाक्टर तिनीहरूलाई वा तिनीहरूको क्षति पछि हटाउन Moles व्यवहार गर्न?
गोडा दुखाइ: घर मा उपचार। गोडा को उपचार को लागि लोक उपचार
Aerosol "Ingalipt": प्रयोग, सङ्केत गर्छ र संरचना लागि चिकित्सकहरु र विरामीहरु, निर्देशन समीक्षा
उपयोगी गुण नाशपाती - रोगहरूबाट लागि सहायता
5W20 मोटर तेल: निर्दिष्टीकरण, सुविधा र समीक्षा